ယခင် နအဖ စစ်အစိုးရလက်ထက် တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ လက်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် သံအမတ်ကြီး Li Junhua က မြန်မာလွှတ်တော်သစ် အတွက် ကွန်ပြူတာတွေ လာရောက် လှူဒါန်းစဉ်မှာ သူရ ဦးရွှေမန်း က အဲဒီလို ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နဲ့ မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပုံမှန် ဆက်ဆံရေး မစတင်မီကတည်းက တရုတ် ပြည်သူ သမ္မတ နိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို အကြံဥာဏ်တွေ အကူအညီတွေ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်း အတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်ကနေ မားမား မတ်မတ် ရပ်တည်ပေးခဲ့တယ် လို့လည်း ပြောပါတယ်။
မကြာသေးခင်က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အတွင်း အမေရိကန် အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ်မှာ ချမှတ်ထားတဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမူတွေကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တရုတ်နိုင်ငံက တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ နောက်ထပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ တိုးမြင့် မလုပ်မချင်း ပိတ်ဆို့ အရေးယူမူတွေကို ရုပ်သိမ်းဖို့ အချိန်မကျသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Victoria Nuland က ဒီကနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ တရုတ် မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားခဲ့ရာမှာ - မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူး ကိုယ်စားလှယ် Derek Mitchell အနေနဲ့ တရုပ်ပြည်ကို သွားရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်မှာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးံHillary Clinton ရဲ့ မှတ်ချက်စကားတွေကိုပဲ ပြန်ပြောလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးချင်းကောင်း ဆက်ဆံရေးတွေ ထားရှိကြတာကို မိမိတို့က လိုလားပါတယ်။
မိမိတို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ မူဝါဒတွေကတော့ တရုပ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာ ထင်ရှားမူတွေ ရှိဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Hi Shwe Mann Tin Maung, What level of your education? Why did you know your military government had influenced on our country Burma more than5decades, until today, why you never noticed our country was poorest in the world, very bad, you go out yourself from Burma & travel to the world, what our country was happening in this state, still you did not know, before you did, please write your good histroy for Burma for future young Burmese to learn about yuo & your team did bad or good result for Burma.
Dec 14, 2011 05:52 AM
If China isagood friend,agood neighbour of Myanmar, why not they stood for Myanmar sanction with their Veto? Actually they have power to deny sanction on Myanmar, but they did not. So? Again, I don't know for the Government, however, for civilian China do nothing, I am sure for that. Instead, they grasp everything. I never, ever heard China aid on behalf of Myanmar, I wasastaff of INGO's. Therefore, I strongly believe, we must rethink of being engaged with China. Non- Benifit to us. I think some young people probably agree to my statement.
u shwe man pyawya me sakar 1 khun kyan khe pa tal bar lall so tot china har myanmar ye meik swe sit mahoke pa so te sakar 1 khun pa
Dec 10, 2011 01:06 AM